September 3, 2013 – democracy for burma
Working Conditions in Thailand’s Fishing Sector reveals evidence of forced labour, debt bondage and violence-VIDEO
On September 3, 2013 September 3, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
THE International Labour Organization (ILO) report Employment Practices and Working Conditions in Thailand’s Fishing Sector reveals evidence of forced labour, debt bondage and violence.
Featuring interviews with 596 fishermen, the majority of whom are migrants from Myanmar and Cambodia, it exposes abuse onboard fishing boats, with 17.3 per cent of the fishers questioned testifying that they had been threatened by their employer, the captain,asupervisor oraco-worker and 101 of the respondents (approximately 17 per cent) recounting that they had worked against their will, unable to leave foravariety of reasons.
The Environmental Justice Foundation (EJF) report Sold to the Sea documented severe human rights infringements, human trafficking, physical violence, forced detention and even murder in the Thai fishing industry, with testimonies from Burmese workers as young as 16 offering details of the systemic abuse. The ILO report substantiates our conviction that human rights abuses are widespread in the fishing industry, both in Thailand and elsewhere. The uncomfortable truth is that fish caught on such vessels has been tracked through international supply chains to the European and US Seafood markets. Fish caught by these modern-day slaves is reaching our own plates.
EJF is working with local activists, responsible companies, the European Commission and the US Department of State’s Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons in order to uncover abuses and their links to international supply chains, and to highlight these issues to decision-makers who can bring about change.
The same lack of monitoring, transparency and traceability that facilitates unscrupulous fishing operators to used trafficked workers and abuse their crews enables illegal fishing activities to take place, such as stealing from coastal countries, damaging marine environments and jeopardising the future health of fish stocks and biodiversity. EJF is working to both defend human rights and protect the environment by combating illegal fishing and human trafficking.
U YE HTUT:ဟိုတုံးက ရှေ့တန်းမှာရောက်နေတော့ ရှိတဲ့စာအုပ်တွေကလည်း
ဟိုတုံးက ရှေ့တန်းမှာရောက်နေတော့ ရှိတဲ့စာအုပ်တွေကလည်း အကုန်ဖတ်ပြီးသွား၊ ရောက်နေတဲ့ နေရာက စာအုပ်စာစောင်လည်း မရနိုင်။ စာငတ် လိုက်တာ၊ ဒီတော့ နောက်ဆုံး အဲဒီအချိန်က ဇီးထုတ်ထဲမှာ ထည့်ပေးတဲ့ ခိုင်ထူး၊ သန်းနိုင်၊ စိုင်းထီးဆိုင် သီချင်းစာသားတွေက အစ အာသာပြေလျှောက်ဖတ်ခဲ့ရတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းက ဘုရားစာအုပ်၊ စာသင်ကျောင်းက ပညာပဒေသာစာစောင်အဟောင်း တွေ့သမျှ ဝါးစားသလို ဖတ်ခဲ့ရတယ်။
အခုကျတော့ စာအပြင် Facebook ပါ ဖတ်တဲ့ဝါသနာတိုးလာခဲ့ပြန်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ နန်နင်း ကိုရောက်တော့ Facebook ကို ၀င်မရ၊ ကိုယ်တင်ချင်တာတင်မရ၊ ကိုယ့်ကို ကလော်တုတ်တာတွေမဖတ်ရ ဆိုတော့ ဟိုတုံးက စာငတ်ခဲ့တာလေး ပြန်သတိရမိ ပါတယ်။
ဒီနေ့ညနေ နေပြည်တော်ပြန်ရောက်ပြီး Facebook ပေါ်က သတင်းတွေကြည့်၊ ကိုယ့်ကို ကောင်းတာရော၊ ဆိုးတာရော Comment ပေးတာတွေဖတ်လိုက်ရတော့ မှပဲ ချဉ်ခြင်းက အာသာပြေပါတော့တယ်။
ချစ်သူ၊ မုန်းသူများအားလုံး ကျေးဇူးတင်ပါ၏။
Myanmar-Thailand expressway to be upgraded to four lane road
Myanmar-Thailand expressway will be upgraded toafour lane road in ten years time, according toareport of Dawei Special Economic Zone Implementing Project.
The expressway was originally constructed by the Italian-Thai Development Company as an earth road, according to Vice President of Central Bank Sett Aung.
Currently they are seeking overseas investors to upgrade the earth road. The company who agrees to invest will have to give back the expenses to Italian-Thai Company in accord with international consultants.
The government has made five steps to implement the special economic zone and will intend to carry it out in 75 years.
Arakanese youth murdered was found nearacreek nearbyaMuslim village
Sittwe,3September 2013): An Arakanese youth, who was later identified as Ko Zaw Zaw of Raychan Byint village under Sittwe Township, succumbed to injuries on Monday.
The villagers of Raychan Byint village witnessed the youth with injuries at around3pm, who was missing since Sunday morning.
The victim was around 22 years old and belonged to the family of U Thingyaan Aung and Daw Pru Ma Chay of Raychan Byint village in the Arakanese capital city, statedavillage elder.
A police officer from Ray Byint police station confirmed the murder of Ko Zaw Zwa. He also added that the body of the Arakanese youth was found nearacreek nearbyaMuslim village named Kha Din Pike, which is close to Raychan Byint Rakhine village.
The investigating officer found that Ko Zaw Zwa, who went missing since he went to mangrove forest near his village to collect fruits the previous day, received severe injuries in his neck, throat and head.
The dead body was then sent to Sittwe hospital for autopsy by the police andacase was also registered in the Ray Byint police station.Investigations are going on, informedapolice officer.
Similar cases were reported from the town of Pauk Taw earlier too. A 41 year-old Arakanese woman named Ma Hla Than Sein from Munying Taw village in Pauk Taw Township was raped and killed by miscreants nearastream located at between Munying Taw Rakhine village and Kyin Ni Byint Muslim refugee camp few days back.
Vijay Nambiar: Rakhine Conflict Is JustaDomestic Affair
On September 3, 2013 September 4, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
United Nation Secretary General’s special advisor on Myanmar Mr. Vijay Nambiar says that the conflict that had broken out in Rakhine State isadomestic issue that is to be settled in Myanmar and no other country needs to interfere the internal affairs.
He said so at the meeting with the state government during his visit to Rakhine State on 1 September 2013.
“When some of the international communities have hinted at stepping in to help in coping with the conflict in Myanmar, some organizations like OIC are trying to interfere it. Asamatter of fact, this conflict is justainternal affair that is to be resolved between two communities just in Myanmar. We don’t like that any other foreign government will intervene this affair,” he said.
Mr. Vijay Nambia arrived in Rakhine State on 1 September and visited Rakhine refugee camps and Bengali refugee camps in Maungdaw Township and Pauktaw Township and Bengali refugee camp in Sittwe Township, it is learnt.
There are some of international and domestic media fuelling the affairs concerning Rakhine’s conflict, he said in discussing the affairs of Rakhine State with the state government in the morning on 1 September.
“To be worse, some of global and internal media are inflaming the conflict. We’ve seen that there isagrowing public discontents between two communities instead of reducing them. International communities understand that communal conflict may change into religious problem if some of international organizations intervene the conflict providing that the problem in Rakhine State is getting worse and worse,” he said.
Moreover, if there may be Myanmar’s affair in the conference of United Nations, reform process may change into something, he pointed. Continue reading “Vijay Nambiar: Rakhine Conflict Is JustaDomestic Affair” →
ဘင်္ဂါလီ မွတ်စလင် အကြမ်းဖက်သမား (၃)ကောင်အား AK-47 မောင်း
SOURCE ARAKAN YOUTH ORGANIZATION
ဘင်္ဂါလီ မွတ်စလင် အကြမ်းဖက်သမား (၃)ကောင်အား AK-47 မောင်းပြန်ရိုင်ဖယ် တစ်လက်၊ ကျည်အတောင့် (၂၀၊ ကျည်ကပ် (၂)ခုနှင့် အတူ ဖမ်းဆီးရမိ နောက်ဆက်တွဲ သတင်း
တရားဝင်ကိုင်ဆောင်ခွင့်မရှိသော သေနတ်အားကိုင်ဆောင်၍ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများအား ဘင်္ဂလားဒေရ်ှ့ နိုင်ငံမှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ပို့ဆောင်ရန်ကြံစည်အားထုတ်ခဲ့ကြသော ကောင်းမြတ်ဟင်္သာစက်လှေမှ လှေသား(၁၃)ဦး နှင့် ဘင်္ဂါလီလူမျိုး(၃)ကောင်အား မြို့မရဲစခန်း (ပ)၄၄၄/၂၀၁၃ လက်နက် ယာယီ ပြင်ဆင်ချက် ဥပဒေပုဒ်မ၁၉-က ဖြင့် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ဘင်္ဂါလီလူမျိုး(၃)ကောင်မှာ မောင်မောင်(ခ)လာမြား(ဘ) ခင်မောင် ဘင်္ဂါလီလူမျိုး၊ ပေါက်တောမြို့၊ မိုအာမက်ဖာရု(ခ)မောင်မောင်စိုး (၂၆)နှစ်(ဘ)ကျော်မင်း(ခ)မာမွတ်မွန်နစ် ဘင်္ဂါလီ လူမျိုး၊ မောင်တောမြို့နယ်၊ မိုဟာမက်ဟာရှင်း(၃၀)နှစ်(ဘ)ပေါ်ယာဇူ ဘင်္ဂါလီလူမျိုး၊ မောင်တောမြို့ နယ် တို့မှဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
(Source : မြိတ်ပုလဲမြေ ဘလော့)
DASSK unable to attend UNFC-Government political dialogue
DASSK KHU DHAUN
According to Pa Doh Mahn Mahn, Secretary of the United Nationalities Federal Council (UNFC), chairwoman of the National League for Democracy (NLD) party Daw Aung Suu Kyi will not be able to attend upcoming political dialogues between the UNFC and the national government’s Myanmar Peace Center, due to schedule conflicts with her trip to Europe.
The meeting will be held September 8 in Chaing Mai, Thailand, and marks the second time UNFC representatives have met with the government’s Union Peace Working Committee (UPWC) to collaborate towards multi-party peace agreements. The first meeting took place in February this year.
Daw Aung San Suu Kyi was invited to participate asathird-party observer of the meeting, along with other non-UNFC political organs like the Nationalities Brotherhood Federation (NBF), the United Nationalities Alliance (UNA), the Arakan Liberation Party (ALP) and the Restoration Council of Shan State/Shan State Army (RCSS/SSA).
Of the4mentioned, the UNA is the only group which has confirmed it will send delegates.
According to Mahn Mahn, the UNFC intends to stand resolutely behind its outline of demands during the talks. “As discussed before with the government’s technical group, the UNFC will continue to promote the agenda of its six-point road map for peace,” he said.
The September 8 meeting will be led by UNFC General Secretary Nai Hantha and 10 delegates from UNFC parties.
U WIRA THU: နာရီတွင် ဓမ္မသဟာယကျောင်းမှာ လက်ခံတွေ့ဆုံဖြေကြားခဲ့သည်။ လာရောက်တွေ့ဆုံသူမျာ Ms.CHRISTINA PLETTEN (နော်ဝေ BERGENS TIDENDE
“ဦးဝီရသူထံ နော်ဝေသတင်းစာ လာရောက်အင်တာဗျူး”
30.8.2013 ညနေ 5း00 နာရီတွင် ဓမ္မသဟာယကျောင်းမှာ လက်ခံတွေ့ဆုံဖြေကြားခဲ့သည်။ လာရောက်တွေ့ဆုံသူမျာ Ms.CHRISTINA PLETTEN (နော်ဝေ BERGENS TIDENDE သတင်းစာ) ဖြစ်ပြီး အမျိုးသားရေး၊ နိုင်ငံရေးများနှင့် မီဒီယာအပေါ် ပြည်သူတို့ ယုံကြည်မှုအတိုင်းအတာများ မေးလျှောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၄င်းသည် 31.8.2013 မနက် စာဝါပို့ချပုံများကိုလည်း မှတ်တမ်းလာတင်သွားကြောင်း သိရသည်။
မေး= ရွှေဝါရောင်သံဃာများ ပစ်ပယ်ခံနေရသည်ဟုလည်း သိရသည်။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို သံဃာတွေက ထိန်းချုပ်ဖို့ကြံစည်လာကြောင်းလည်း ပြောလာကြသည်။ ဘယ်လိုသဘောရလဲ…?။
ဖြေ= ဆရာတော် ဦးဥတ္တမလည်း လမ်းဘေးသေခဲ့ရတာပဲ။ ဘုရားပြီးရင် ငြမ်းဖျက်ကြမှာပဲလေ။ မြန်မာပြည်မှာ နိုင်ငံရေးသမားစစ်စစ်ကို ပြပါဆိုရင် သံဃာတွေကိုပဲ ပြရမှာ။ အမတ်တို့၊ သမ္မတို့ဆို ဝေလာဝေး မဲပေးခွင့်တောင်ရှိတာမဟုတ်ဘူး။ အင်္ဂလိပ်ခေတ်၊ ဂျပန်ခေတ်၊ မဆလခေတ်၊ ငြိမ်ပိခေတ်၊ နအဖခေတ်၊ ဒီမိုကရေစီခေတ်-ဘယ်ခေတ်မှာမှ သံဃာနှင့် မကင်းခဲ့ဘူး။ သံဃာတွေမှာ ပြည်သူ့အကျိုး စီးပွားတစ်ခုကလွဲလို့ ဘာမှ မျှော်ကိုးမှုမရှိဘူး။
သံဃာတွေက နိုင်ငံရေးကို လွှမ်းမိုးဖို့ စိတ်ကူးမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အစိုးရနှင့် ပါတီတွေကို အမြဲတန်း စောင့်ကြည့်နေတယ်။ ထောက်ခံချီးကျူးဖို့ ဝန်မလေးသလို၊ ကန့်ကွက်ရှုတ်ချဖို့လည်း ဝန်မလေး တတ်ကြဘူး။ ရခိုင်အရေးမှာ ဦးသိန်းစိန်ကိုထောက်ခံကြသလို၊ လက်ပံတောင်းအရေးမှာ ဒေါ်စုကို ထောက်ခံခဲ့ကြတာ သက်သေပဲ။ သံဃာတွေရှိတော့ အကြံအဖန်နိုင်ငံရေးသမားတွေ ညားစားလို့တော့ မရတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။
အလုပ်သမားအရေး ဖြေရှင်းရန် မလေးရှားသို့ မြန်မာအထူးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ စေလွှတ်မည်
လတ်တလော၌ တရားမဝင် နိုင်ငံခြားသားများကို ဖမ်းဆီးနေသည့် မလေးရှားနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသော မြန်မာအလုပ်သမားများအရေးကို နှစ်နိုင်ငံ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် မြန်မာအထူးကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံသို့ ရက်ပိုင်းအတွင်း သွားရောက်မည် ဖြစ်သည်။
အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဆောင်သည့် အဆိုပါအဖွဲ့တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်အတူ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာန၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန တို့မှ တာဝန်ရှိသူများ ပါဝင်မည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ယခုလ ၉ ရက်နေ့ဝန်းကျင်တွင် သွားရောက်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ အကြီးတန်းအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
သုံးလကြာ စစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်မည့် တရားမဝင် နိုင်ငံခြားသားများကို ဖမ်းဆီး နှိမ်နင်းရေး အစီအစဉ် Enforcement Operation (မလေးရှားအခေါ် အော်ပရာစီ) ဟု အမည်ပေးထားသည့် ယင်းစစ်ဆင်ရေးတစ်ရပ်ကို စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် စတင်နေပြီ ဖြစ်ပြီး ၂၄ နာရီအတွင်း တရားမဝင် မြန်မာ လုပ်သား ၅၅၅ ဦး အပါအဝင် နိုင်ငံခြားသား ၂၄၄၃ ဦးကို ဖမ်းဆီးထားပြီ ဖြစ်ကြောင်း မလေးရှားအခြေစိုက် The Star သတင်းစာက စက်တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့တွင် ဖော်ပြထားသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံသို့ တရားမဝင်နည်းလမ်းဖြင့် ဝင်ရောက်ကာ မြန်မာနိုင်ငံသား ဟု အမည်ခံထားသူများကိုလည်း သေချာစိစစ်သွားမည် ဖြစ်ပြီး အမှန်တစ်ကယ် မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်သူများအရေးကို ဖြေရှင်းပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတရုံးနှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ Continue reading “အလုပ်သမားအရေး ဖြေရှင်းရန် မလေးရှားသို့ မြန်မာအထူးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ စေလွှတ်မည်” →